အားလုံးမိန့်ပေါ်တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းအခမဲ့ရေကြောင်း, WE ခပ်သိမ်းသောအရပ်တို့၌မ MINIMUM ORDER REQUIRED Shipping
tank ထိပ် & Camisoles
ဝါဂွမ်း & ပိတ်ချောဖိနပ်
စပျစ်သီးကိုအဆမတန်ကြီးမားစပ်ချုပ်ပညာ Hippie Dress
$72.60 $121.00 သငျသညျ (40% Save$48.40)
တစ်ခုမှာအရွယ်အစား / ရောင်စုံ
ပြန် & Exchange များ
ပစ္စည်း: Flax & Cotton
အစားထိုး, ပြန်သွား & ပြန်အမ်းငွေများ:
ပစ္စည်းပြန်လာနိုင်ရန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လာ / လဲလှယ်စာမျက်နှာသို့သွားရောက်လည်ပတ်ကျေးဇူးပြုပြီးhttps://www.buddhatrends.com/pages/returns-exchange
ဒါဟာပျက်စီးသွားသော / ကျိုးကို item ၏ဓာတ်ပုံများကိုပေးပို့ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်ဦးမဖြစ်မနေအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်ချွတ်ယွင်း၏ရှင်းလင်းသောဓါတ်ပုံတွေပေးပို့လျှင်၎င်းသည်ကိုအလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မည်။
ပစ္စည်းပျက်ယွင်းနေမဟုတ်ပါဘူးနှငျ့သငျရိုးရှင်းစွာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အရွယ်အစား / အရောင်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းမှ disliking ၏ပြောင်းလဲချင်လျှင်၎င်းသည်တစ်ချိန်ကပြန်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဖောက်သည် restocking စွဲချက်သကဲ့သို့ကောင်းစွာကိုင်တွယ်ခြင်း, ပြန်လာရေကြောင်းဆပ်ဖို့တာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်။
သတိပြုပါ: ကျွန်တော်စင်တီမီတာအတွက်အတိအကျကိုတိုင်းတာမှုများနှင့်အတူအသီးအသီးထုတ်ကုန် link ကိုအားလုံးကို sizing အသေးစိတ်ကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါပြီ, အမိန့်အားမရမတိုင်မီဒီအစစ်ဆေးအဲဒီနောက်မဆိုမပျော်ရွှင်ရှောင်ရှားရန်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပျက်ပေလိမ့်မည်။ မှားယွင်းနေအရောင်သို့မဟုတ်အရွယ်အစား၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့ချက်ချင်းလည်းတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ပစ္စည်းများ၏ရုပ်ပုံများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုများကိုပေးစွမ်းဖောက်သည်ထောက်ခံမှုဆက်သွယ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးပို့ခြင်း & ပြန်လာလိပ်စာသည်သင်၏တိုင်းပြည်နှင့်စတော့ရှယ်ယာအပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသည်ကိုသတိပြုပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အားလုံးအသေးစိတ်ပြန်လာလိပ်စာနှင့်ညွှန်ကြားချက်များကိုပြန်လည်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အတွင်းရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်အဖြစ်သင်တို့သည်ငါတို့၏ပြန်လာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိုက်နာကြောင်းအကြံပြုပါသည်။
အသုံး၏ဖြစ်ရပ်ဆေးကြော, ပျက်စီးသို့မဟုတ်ပစ္စည်းများ၏မူလအခွအေနေကနေမဆိုအခြားပြုပြင်မွမ်းမံတှငျကြှနျုပျတို့လျင်မြန်ရလဒ်များကိုအာမခံလို့မရပါဘူး။ အဆိုပါပြန်လာသည့်မူဝါဒတင်းကြပ်စွာပစ္စည်းပြန်လာမူဝါဒ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဤအခြေအနေများကဖော်ပြသည်။ ထုပ်ပိုးနှင့်အတူမူရင်းခွအေနအေမပါဘဲမည်သည့်ပစ္စည်းကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ရရှိနိုင်စျေးအသက်သာဆုံး Track ရေကြောင်းရွေးချယ်စရာကိုသုံးပါ။ အကောက်ခွန်မှာဆီးအတားခံရတစ်ခုကို item ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ကျနော်တို့ကို item ၏အခွန် / သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတာဝန်များအဘို့အပေးရန်တာဝန်မရှိကြပေ။
ပြန်ရေးမူဝါဒ, သင်အဖြစ်အထုပ်အပေါ်ဖော်ပြထားခြင်းရန်ရှိသည် "ပြန်လည်ကုန်ပစ္စည်း0$ နျဖိုး။ "
ပစ္စည်းမဆိုဖျက်သိမ်းဘို့, သငျသညျအမိန့်များနေရာချထား၏ 12 နာရီအတွင်းကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်ရှိသည်။ တစ်ချိန်ကတင်ပို့ items ဖျက်သိမ်းရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ပစ္စည်းမူရင်းထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် undamaged အခြေအနေနှင့်အတူပြန်ရောက်လျှင်တစ်ဦးကပြန်အမ်းငွေကိုသာထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကခြေရာခံအဘယ်သူမျှမပြန်အမ်းဘို့အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
ပြန်အမ်းငွေအမိန့်ချတဲ့အခါကိုရှေးခယျြကနဦးငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုဖောက်သည်အပေါ် မူတည်. re-imbursed ဖြစ်ပါတယ်။ paypal ပြန်အမ်းငွေပြန်မြင့်သောရေကြောင်းစွဲချက်ကိုရှောင်ရှားဖို့ဖောက်သည်၏တည်နေရာပေါ် မူတည်. ကွဲပြားစေခြင်းငှါငါတို့ထောက်ပံ့ပြန်လာလိပ်စာများမှာကို item ကိုလက်ခံရရှိ၏ထိုနေ့အတွင်းလုပ်နေကြသည်။ Credit Card ကိုပြန်အမ်းငွေများဒီပြန်အမ်းဘို့ပုံမှန်အတိုင်းဘဏ်အချိန်ဖြစ်သကဲ့သို့ယေဘုယျအား 10-15 ရက်ပေါင်းန်းကျင်ကြာပါတယ်။
တစ်ဦးက restocking ကြေးတိုင်းပြန်လာ / လဲလှယ် / အစားထိုးဘို့နုတ်ယူပေမယ့်စုစုပေါင်းအမိန့်ပမာဏ၏မပို 25 ထက်% ပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံမှုအဖွဲ့သည်အမြဲတမ်းဖောက်သည်လွယ်ကူချောမွေ့ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာဆိုမေးမြန်းချက်များအတွက် "ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ" စာမျက်နှာသုံးစွဲဖို့လိုအပ်တယ်, ကြှနျုပျတို့သင်သည်သင်၏ပြဿနာများဖြေရှင်းရန်ကူညီရန်နှစ်သက်သောမည်ဖြစ်သည်။
သင်္ဘောသားလည်ပင်းပန်းရောင်သိုးမွေးဇာထိုးဆွယ်တာအင်္ကျီ $59.20 $74.00
ဂျက်က Black / တစ်ခုမှာအရွယ်အစား ဖုန်ထူပန်းရောင် / တစ်ခုမှာအရွယ်အစား
daisy ပုံနှိပ်လဲမှို့အို-လည်ပင်းထူထပ်သော Dress
daisy ပုံနှိပ်လဲမှို့အို-လည်ပင်းထူထပ်သော Dress $66.00 $110.00
အပြာရောင် / တစ်ခုမှာအရွယ်အစား အစိမ်းရောင် / တစ်ခုမှာအရွယ်အစား လိမ္မော်ရောင် / တစ်ခုမှာအရွယ်အစား
Cowl လည်ပင်းအဆမတန်ကြီးမားဆွယ်တာအင်္ကျီ Dress
Cowl လည်ပင်းအဆမတန်ကြီးမားဆွယ်တာအင်္ကျီ Dress $74.40 $93.00
အရောင် Block ကိုဒင်ဗာမြို့မှ Dress အင်္ကျီ
အရောင် Block ကိုဒင်ဗာမြို့မှ Dress အင်္ကျီ $70.40 $88.00
တစ်ခုမှာအရွယ်အစား / အလင်းပြာ
မကြာသေးမီက Viewed ပစ္စည်းများ